Resaky ny mpitsimpona akotry : kely sokatry sy haingom-bato dobla fotsy | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : kely sokatry sy haingom-bato dobla fotsy
Par Les Nouvelles sur 06/02/2017
Aza atao ranon’Ikopa ka tonga vahiny vao mavomavo. Ezaka no aseho, tanjona no apetraka ho tratrarina, sao dia famendrofendroana mialoha raha hogahoga no entina hitsenana ny tetika mendrika fanohanana. Na efa nilentika aza izany fanantenana izany noho ny toky efa ritra, (toy ny ao amin’ny sehatra pôlitika ihany), dia mbola maro ny olona mitaiza mangina nofinofy any am-po amin’ny faniriana fisongadin’ny ekipam-pirenena eo anivon’ny sehatry ny baolina kitra iraisam-pirenena. Lavitra ny dingana ahatongavana amin’izany, fa toy ny zava-drehetra na inona na inona resahana dia tsy maintsy avy aty ifotony no miainga.
Raha kitra no atao resaka dia mbola mirefarefa amin’ny tany ny fahombiazana. Na be aza izay andrakandrana efa naseho izay, samy nandamoka avokoa. Tapa-kevitra izao ny raiamandreny mitantana io taranja io amin’ny fametrahana tetika vaovao ifehezana ny asa fanarenana.
Tazana eo amin’ny fikatrohana avo lenta fa toa miankina be amin’ny mpanazatra ny vokatra. Esoeso noho izany no manatevin-dresaka etsy sy eroa raha naheno ny fanomezana ny adidy fanazarana ho an’ny vahiny iray tsy heno laza, ny rahalahiny mpanazatra ny ekipa malaza atao hoe Chelsea any Angletera no azo lazaina hoe haingom-batony. Eo andanin’izany koa ny mpanatsatso ny an’ny tena, mampitaha ny fanaovam-baolina amin’ny fampiadina akoholahy. Na inona na inona fahaizan’ny mpanotra sy mpanosotra menaka hoy izy ireo ny akoholahy fataka dia fataka ihany ary ny akoholahy masira dia kely fantsy eny foana.
Raha izany no toe-tsaina entina hisondrotana dia tsy hiainga avo mihitsy fa hitorovaka lalandava, hilalao vovoka. Eny ifotony anefa no hiatomboka ny ezaka ny tanora tsapa fa havanana amin’ny filalaovana no ho raisin’ity mpanazatra ity an-tànana, izany hoe ireo tanora 17 taona ao amin’ny Barea Akademia heverina ho antoky ny ampitso no volavolainy ho vonton’ny teknikan’ny baolina sy ny fahakingan-tsaina eo amin’ny fifehezana sy fampiasana izao karazana tetika sy paikady rehetra izao. Tsy atao ambanin-javatra ny fanitarana ny talentany tsara kolokolo sy tsara tohana noho ny fitaizana ny vatana.
Tsy mbola velon-drirana matoa mbola mipasoka ny tompon’andraikitra. Aleo ho hita ny vokany. Raha tena ombalahy tokoa izany Barea rahampitso izany, hidonan-tsetroka ny vavorona, hitera-bovoka ny ao ambany gaodasy, hikopakopaka ny volo-tsoroka rehefa ireny miray miray hina samy manatanteraka ny anjarany ao amin’ny tetika napetraky ny mpanazatra na eo am-panafihana na eo am-piarovana..